August 9, 2020 NEWS 8
GAALKACYO(P-TMES) – Qaar kamid ah Odayaasha, Isimadda & Waxgaradka beelaha gobalka Mudug ayaa sheegay in ay ka xun yihiin dagaalkii saaka dhacay ee dhexmaray ciidamada dawladda Puntland oo gudanaya waajibadkooda shaqo iyo kuwa kasoo horjeeda nabadda oo ay sheegeen in ay ahaayeen dad ku howlan falalka amaan-daradda ayna ka shaqeynayaan sidii loo soo qaban lahaa.
Qaar kamid ah dhinacyada hadlay ayaa sheegay in ay raali ka yihiin in ay dawladdu talaabo ka qaado cid kasta oo kasoo horjeeda ammaanka gobalka Mudug, isla markaasna aysan qabiil yeelan doonin kuwa nabadda diidan, oo ay tahay in wadajir lays kaga kaashado.
Isimadda gobalka qaarkood oo ka hadlay halka lagu aasay Taliyihii ciidamada Madaxtooyada Puntland ee lagu dilay saaka weerarkii dhacay ayaa sheegay in ay dawladda ka sugayaan in ay jawaab-cad ka bixiso kuwii ka dambeeyey falkaas oo ay gacan ku siinayaan.
Sidaas oo kale, wasiirka Maaliyadda Puntland Xassan Shire oo ka hadlay Janaazada ayaa sheegay in ay meel kasta uga dabatagi doonan kuwii falkas ka dambeyeey oo ay qaban doonaan ama ay bartooda ku toogan doonan, iyadoo awooda la saarayo sidii nabadda loo sugi lahaa.
Hadii la rabo xalka somalia,hala mideeyo gaalkacayo. Dhinacey doontaba ha raacdee hadii ay noqoto magaalo mideysan,somalia wey hagaageysa. Inta badan somalidu ma oga lkn dagaalada somalia qayb wey ayay magaaladani ka tahey. Inta ay gaalkacayo laba u qaybsan tahey qadaadweyn xal heli meyso
dhinacay rabto xalama xaq ma ahan oo marka lafiirsho hantida,deegaanka,dadka gaalkacy 75% waa dhinaca puntland qofkasta oo2da dhinac ahna intaa wa qirsan yahay marka hadii cid laraacayo dee waa in puntland la raacsho laakiin reer puntland marabaan in 1xaafad oo galkacyo ah soo raacdo oo siyasadooda guud saamayn kuyeelato oo marka xamar iyo garowe siyaasad isku qabtaan dee xaafadaa baraxley ee konfurta galkacyo waxay ku khasab yihiin inay puntland ka dhinac hadlaan oo xamar tageeraan,,laakiin dhacdadii maanta wa isla reer puntland oo ragii jaadka covid-19 kajoojiyay baa khamrigii amxaarada soo galiyay puntland.
Allah yaa cizak ayaa leeyahay. Waxaa xaqiiqo ah in reer mudug ay saanta horay u qaadeen oo ka tilaabsadeen wakhti jaahiligii somali ragaadiyey. Waxay garowsadeen in uu mujrim lahayn tol iyo qabiil oo uu xaataa hooyadiis dhashay saq dhexe habeenkii uu weerar iyo salal ku qaadayo. Reer puntland intooda kale iyo somaali intooda kale waxaan kula talin in ay ku daydaan gobanimada reer mudug oo aysan garab u noqon daalim mujrim ah ee xariga Alle ka furtay.
3dii Madaxweyne ee isku xigay Puntland kalana ahaa Cabdiraxman Faroole, Cabdiweli Gas & Siciid Deni, waxay ka siman yihiin in howlgalada loo diro ciidamada Ilaalada gaarka ah ee Madaxtooyada, marar badan ayaa su’aal laga keenaa ujeedada ciidanka Ilaalada Madaxtooyada oo ah kuwa u dambeeya loogu diro howlgalo ay qaban karaan Booliska iyo Daraawiish lagu xoojiyey.
sababtu waa hadii ciidamo reer mudug ah loo diro hawlgalada galkacyo arintu waxay noqom jufo reer hebel baa ninkeena dishay ee hanalagu soo wareejiyo laakiin hada arintu waa ciidamadii puntland oo kayimid gobolo kale hawalna fulinaya marka rer mudug waxay leeyihiin ciidamadii puntland ama madaxtoyada baa hawl gal wada
Ma gobolka oo dhanbaa la,iskudaraa mise magaalada galkacyo oo qura ogowna Hadaad adiga aaminsantahay in aad magaalada 75% dagantahay aniguna waxaan aaminsanahay in aan gobolka mudug 95% daganahay’
Daka qaar baan ogayn in dhic karto in hal magaalo labo maamul loo kala qaybin karo,oo aysan wax dhibaata ah lagayn dunida meeli badan bay ja jirtaa.waa in aan wax walba la qabyaaladayn dadko waa Soomaali horta,cudurka jaahiliga ah ee qabyaalada waa in laga kuraa.
Inta qabyaalado ay tahay mida wax wakba cabir kooga dhigayo shaki kuma jiro in Soomaalido aysan dib u dhac ka baxayn,xitaa kuwa leh anagaa isko beel ah oo leh leh goboladaan wax Nabad iyo maamul wanaag ka jira ma laha waa kuwaasi maalin walba loo fadhiyo in la heshiisiiyo.
War sanduuqa qabyaalada ka baxa oo fannka iyo isko dirka,kala qaybinta dadka Soomaaliyeed iska daaya,nabada iyo is-dhexgalka dadka Soomaaliyeed ha la taageero.
gobolka mudug 5 degmo uu kakoobnaa jariiban,galdogob oo puntland ah.hobyo ,xaradhere oo galmudug ah,gaalkacyana waa 4xaafadood 3dex puntland ah,iyo xafada baraxley ama wadajir sida qofba u yaqaan oo galmudug ah,, hobyo oo galmudug ah,garacad oo puntland ah isku masaafo ayb u jiraan galkacyo butinle oo puntland ah iyo iyo galinsoor isku masafo ay u jiraan galkacyo marka 95% halka aad ka xisaabisay mafahmin
Wararkii ugu dambeeyey een kulamada Muqdisho, qodobo laga heshiiyey & madaxda maamulada oo safraya.